निद्रामा झस्कने समस्या छ ? (जानिराखौँ बच्ने उपाए) - DURBAR TIMES
HomeLife Styleनिद्रामा झस्कने समस्या छ ? (जानिराखौँ बच्ने उपाए)
प्रायः मानसिक तनाव भएका, चिन्ताका कारणले निद्रा नलागेका, निन्द्राबाट बारम्बार झस्किएर सुत्न गाह्रो भएका बिरामी अस्पताल आउने गर्छन्। यस्तो समस्या भएका व्यक्तिमा निद्राको बीचबीचमा बिउँझिने, डर लाग्ने, उठ्दा पसिनै–पसिना हुने र श्वास फेर्न गाह्रो हुन्छ। यो समस्या पुरुषमाभन्दा महिलामा बढी देखिन्छ
Previous articleमैत्रीपूर्ण खेलका लागि महर्जनलाई कार्यवाहक प्रशिक्षकको जिम्मेवारी
Next articleजनगणना फारम इसाइ, ईस्लामी, कम्युनिस्ट र सेकुलरको जालझेल ? : अरुण सुवेदी